Nalain’ny Governemantan’i Ekoatora Ireo Fitaovan’ny Fantsom-pahitalavitra, Namela Azy io Tsy Ho Afaka Nandeha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2016 11:41 GMT
Mpanao gazety Ramiro Cueva. Dikanà lahatsary avy tamin'ny YouTube-n'ny Ecotel TV.
Niaraka tamin'ny polisy, naka ny fitaovan'ny fahitalavitra Ecotel ny Masoivoho ho an'ny Fandrindràna sy Fanarahamaso ny Fifandraisan-davitra (Arcotel) ao Ekoatora, iray amin'ireo fahitalavitra be mpijery indrindra any amin'ny tanàna atsimon'i Loja, ary tsy afaka nandeha intsony ilay izy.
Ao amin'ny kaonty Twitter-ny ofisialy, nandefa sarin'ilay zavatra nitranga ny Ministeran'ny Atitany (@MinInteriorEc) ary nanome toky fa nohajaina tanteraka ny zon'olombelona tao anatin'ilay dingana.
(Mivantana) Mizotra ao anatin'ny fanajana tanteraka ireo #Humanrights (Zon'olombelona) ny fakàna ny fitaovan'ny #EcotelTv.
Araka ny Fundamedios, Fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Ekoatoriana miaro ny fahalalahana miteny, nilaza ny tompon'ny fahitalavitra Ecotel, Ramiro Cueva, fa namporisihan'ireo tenin'ny Filohampirenena Ekoatoriana, Rafael Correa, tamin'ny fandraisam-pitenenana faha 454 fanaony isan-kerinandro (antsoina hoe “rohy amin'ny olom-pirenena”) ny 12 Desambra teo ilay fakàna ny fitaovana, nanamarihany an'i Cueva hoe “mpanao resabe mody misalotra ny maha-mpanao gazety nefa miteny lainga fotsiny, mandainga mba hanandrana ny hamotika sy hanaratsy ny governemanta nasiônaly.”
Niresaka ilay vaovao izay nalefan'ilay fandaharana i Correa, io vaovao io izay mitsikera fa nafindra tao amin'ny tanànan'i Loja tao amin'ny Kolejy Bernardo Valdivieso Millennium ireo fitaovana tao amin'ny Sampam-pampianarana Gualaquiza San Juan Bosco, izay ao amin'ny faritra andrefan'i Ekoadaoro, mba hanaovan'i Correa fitokanana ilay sekoly ny 8 Desambra.
Nilaza i Cueva fa na marina daholo aza izany rehetra izany, nanaiky izy fa efa voalahatra tany aloha taminà raharaha mahavoa ilayy fandaharana noho ny tsy fandoavany onitra izay napetraky Filankevi-Pirenena Momba ny Fifandraisan-davitra (CONATEL) ny taona 2002 no antony ara-dalàna nanaovana ilay fakàna ny fitaovany. Araka ny gazety an-tsoratra El Comercio, nodidiana tsy hampitsahatra ny fandaharany ilay fahitalavitra ny taona lasa, fa nanao fampakàrana didy izy ireo.
Manamafy ilay fanambaràna nataon'ny Fundamedios fa nandalo tamin'ny zotra ara-dalàna ilay fantsom-pahitalavitra, izay zoro ijoroan'ilay fanamarinana araka ny lalàna ny fakàna ireo entana:
Tamin'izany fotoana izany, tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra RTV-653-23-CONTAEL-2014, nanapa-kevitra ny Filankevi-Pirenena Momba ny Fifandraisan-davitra (CONATEL) ny “hanomboka ny dingana fanapahana mialohan'ny fotoana, amin'ny anaran'ny tenany irery, ny fanomezandàlana hitrandraka ny fantsona 22 UHF” an'ny fahitalavitra Ecotel, naiditra ny volana Aogositra 1996 ary nohavaozina ny Jolay 2008, noho ireo voalaza fa vola tsy voaloa taminà vola tokony naloa ho avy amin'ny fampiasàna ilay fanomezandàlana tamin'ny taona 2002, mitentina 151,20 Dolara Amerikana.
Taterin'ny ny El Comercio fa nandeha tao amin'ny faritanin'i Loja nandritra ny 19 taona ny Fahitalavitra Ecotel , mampiasa olona 42 ary mandefa fandaharana 18 vokaina eo an-toerana sy filazambaovao vaovao efatra.
Nitohy ny fanambaràn'ny Fundamedios:
Mifototra amin'ilay Fanapahan-kevitra Vonjy Maika Fahafolo ary Andininy faha 112, andalany faha-10 an'ny Lalàna Organika momba ny Serasera ny CONATEL mba hanakanana ilay fahitalavitra tsy handefa na inona na inona intsony. Mila ny manampahefàna ara-dalàna io fanapahan-kevitra io mba hanapaka ny onjam-peo sy sarin'ireo media izay tsy nanomboka nisokatra tamin'ny fotoana voalaza; ireo izay tsy nandoa ilay vola ho an'ny fampiasàna ny fanomezandàlana; ireo izay nanofa ny onjam-peony nandritra ny roa taona, ao anatin'izany, ho raisina anaty kajy ilay tatitra navoakan'ny Kaomisiôna ho an'ny Fanamarinana ny Fanomezandàlan'ny Fahitalavitra sy Onjam-peo tamin'ny May 2009.
Faharoa tamin'ny fakàna fitaovana natrehan'ilay fahitalavitra io. Ny 5 Desambra 2013, nisy hetsiky ny polisy nanao bemidina vao maraina be tao amin'ilay toerana mba haka ny fitaovana tao amin'ny Onjam-peo Ecotel.
Nandritra izany fotoana izany, nampitaina avy tamin'ny vohikalany Ecotel.TV ny fandaharana.
Amin'izao aloha, alefa amin'ny alalan'ny “câble” sy ny Aterineto ny Ecoteltv eto Loja amin'izao fotoana izao. Aza miato mihaino
Ny folakandro, olona am-polony no nifamory teo anoloan'ny toerana misy ilay fahitalavitra ho firaisankina miaraka amin'ny Fahitalavitra Ecotel.
Nandefa ity sary ity tao amin'ny Twitter ny Primer Reporte (@primereporte):
Fanohanana | vondrona sosialy manohana sy miray hina miaraka amin'ny haino aman-jery @EcotelRadio.
Tsy nalefaka ho an'ny fahalalahana maneho hevitraireo taona vitsy nifanesy lasa farany tany Ekoatora. Mbola tsaroan'ireo Ekoatoriana maro ao an-tsainy ireo hanihany avy tamin'ny Crudo Ecuador, izay nanandrohadro ny filoha sy ny governemantany, teo amin'ny iray taona taty aorian'ny nakaton'ny tompony ilay vohikala vokatr'ireo fandrahonana. Vao haingana kokoa, olon-tsotra iray no nampidirina am-ponja noho ny fitehafana nandritra ny fihetsiketsehana, ary mpitarika mpanao politika iray hafa koa noho ny famborahana ny fisian'ny kiantranoantrano ataon'ny eo amin'ny fitondrana.
Loja: Tsy mandeha ny Fahitalavitra Ecotel… ny Asabotsy, fantatrao hoe iza no mikomy manohitra ilay fahitalavitra
Firaisankina: Fiolahana vaovao ho an'ny fahalalahana miteny. Nanao bemidina tao amin'ny @ecoteltv ny Correismo (mpomba an'i Correa) ary naka ny fitaovana, nahatonga azy io tsy handeha
Araka ny bilaogin'ny Journalism in the Americas (Fanaovan-gazety any Amerika), nandany ambangovangonà lalàna manjavozavo sy midadasika i Ekoatora, izay manome fahefana ny governemanta hametraka sazy fahatany sy hanivana ny gazety, ny taona 2013.
Amerika Latina26 Oktobra 2020